October 2017 - Jireenya Badhaatu
October 28, 2017 Sammubani One comment
Torbaan darbe irraa itti fufuun itti-gaafatamumma hafan har’a ni ilaalla.
2.Itti gaafatamummaa aklaaqa barsiisuu– aklaaqa (amala) bakka lamatti qoodu dandeenya. Amala gaarii fi amala badaadha. Guddisaan mataa ofitii fi ijoollee amala gaariin faayun amala badaa irraa fageessuf tattaafachu qaba. Read more
Guddinna Ijoollee- Kutaa 1
October 21, 2017 Sammubani Leave a comment
Dhiira fi dubartiin wal-jaallatan erga walitti dhufanii hawwiin isaanii guddaan ilmaan gaarii horuudha. Jalqaba irratti walitti dhufuuf dheebochaa turan. Amma immoo ilma gaarii argachuudha. Garuu sababa adda addaa irraa kan ka’ee wanti isaan yaadan galma osoo hin gahin abdiin isaanii jalaa dukkanaa’a. Tarii sababni kanaa guddaan akkaataa maatii gaarii itti ijaaran wallaalu irraa kan burqe ta’uu danda’a. Beekumsi ibsaa dukkanaa waan ta’eef, beekumsaan yoo hin tarkaanfatin jireenyi ni dukkanoofti. Read more
October 14, 2017 Sammubani 2 comments
Torbaan darbee suura Faatiha irraa waa’ee daandii sirrii ykn qajeelaa ilaaluf yaalle turre. “Daandii sirrii jechuun haqa beeku fi [wanta beekan] hojii irra oolchudha.”jenne turre. Namni hunduu ani daandii sirrii irra jira jedhe yaadu danda’a. Garuu daandii sirrii irra jiraachu isaa ragaa maalii qabaa? Namoota fakkeenya (role model) isaaf ta’an kan addunyaa fi aakhiratti milkaa’an ni qabaa? Sirritti itti xinxalli, addunya qofa hin jenne, aakhirattis kan milkaa’an ni qabaa? Tarii addunyatti milkaa’anii aakhiratti kasaaru danda’u. Kanaafu, warroota addunyatti milkaa’ani aakhiratti kasaaran hordofuun bu’aa maalii qabaa? Keeyyanni Faatiha ishiin dhumaa jireenya keessatti eenyun akka fakkeenyatti (role model) fudhachu akka qabnu fi eenyun akka fakkeenyatti fudhachuu akka hin qabne nutti akeekti. Haa jalqabnuu… Read more
Xurree Milkaa’inna fi Gammachuu-Lakk.20
October 11, 2017 Sammubani 3 comments
Nama tokko dhugaan yoo jaallatte, isa duuba hin hamatin, bakka inni hin jirretti yommuu maqaan isaa badu ati kabaja isaa eegif. Hanqinna isaa irra darbiif. Dogongora isaa amala gaariin sirreessif. Badii irratti hin gargaarin. Kana irra toltu irratti gargaari. Fakkeenya gaarii ta’iif yookiin isa akka fakkeenya gaaritti fudhu. Read more
Hiika Faatiha Beekuf-kutaa 2ffaa
October 7, 2017 Sammubani 3 comments
Hiika suuraa Faatiha sirnaan beeku fi irratti xinxalluun, milkaa’innaa fi gammachuu addunyaa fi Aakhiraa akka goonfatan nama taasisa. Mee sirritti dubbisi, itti xinxalli iccitii ajaa’iba argita. Milkaa’inni fi gammachuun kee faatiha keessatti guduunfame siif jira. Read more
Kuusaa Select Month October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 July 2015
Ragaalee Dhugummaa Ergamaa-kutaa 2